चीन इलेक्ट्रिक चल र्याकिंग भारी शुल्क चुनिंदा स्ट्याकिंग जस्ती गोदाम भण्डारण मेजानाइन क्यान्टिलिवर शेल्फ धातु कारखाना र निर्माताहरू | EBIL
इलेक्ट्रिक चल योग्य रैकिंग भारी शुल्क चुनिंदा स्ट्याकिंग ग्याल्वनाइज्ड वेयरहाउस भण्डारण मेजेनाइन क्यान्टिलिवर शेल्फ मेटल
सिंहावलोकन द्रुत विवरण उत्पत्तिको स्थान: Jiangsu ब्रान्ड नाम: EBILTECH मोडेल संख्या: EBIL-EMR प्रकार: मोबाइल र्याक र ग्रेविटी र्याक, मोबाइल र्याक र ग्र्याविटी र्याक स्केल: भारी शुल्क क्षमता: १00००-२K०० KG रंग: अनुरोधको आकार: अनुरोधको रूपमा HS कोड : 3030०89000००० सुविधा: संक्षारण संरक्षण इलेक्ट्रिक मोबाइल र्‍याक मोबाइल प्यालेट र्याकि units इकाईहरू गाईडेड बेसहरूमा स्थापित छन् जुन पछिल्लो रूपमा स्लाइड हुन्छ, बहुको आवश्यकतालाई हटाउँदै ...
मोबाइल र्याक र ग्रेविटी र्याक, मोबाइल र्याक र ग्र्याविटी र्याक
मोबाइल प्यालेट र्याकि units एकाईहरू गाईड बेसहरूमा स्थापित छन् जुन ढिलाई पछि स्लाइड हुन्छ, बहु निश्चितको आवश्यकता हटाएर
aisles Movirack मोबाइल र्याकि and र शेल्फिंगको साथ, aisles मात्र खुल्दछ जब अपरेटरले पहुँच अनुरोध गर्दछ।
मोटर चालित मोबाइल बेस इलेक्ट्रोनिक शक्ति द्वारा संचालित छन् र भुइँमा रेल द्वारा निर्देशित छन्।
* रिमोट र कम्प्युटर-नियन्त्रण भण्डारण
* कुनै पनि प्यालेटमा सीधा पहुँच
* ठाउँको कुशल उपयोग
Movirack एकाइहरू मोबाइल बेसहरु मा स्थापित छन्, एक ऐस खोल्न को लागी इच्छित प्यालेट को सीधा पहुँच प्रदान गर्दछ।
उपलब्ध स्थानको उपयोग दुई आधारभूत परिसरमा आधारित छ: भण्डारण क्षमता बढाउने र आवश्यक भण्डारण क्षेत्र घटाउने।
१. प्रश्न: के तपाईं वितरक वा निर्माता हुनुहुन्छ?
A: हामी करीव २० बर्षको लागि पेशेवर र अग्रणी निर्माता हौं। हामी उत्पादन र निर्यात उच्च गुणवत्ता प्यालेट र्याकिंग, बहु
शटल प्रणाली र रोडिओ शटल रैकिंग, ASRS जुन हाम्रो ग्राहकहरु बीच एक धेरै उच्च प्रतिष्ठा छ। हाम्रो anual उत्पादन क्षमता
१०,००,००० टन र्याक अवयव र १,००० युनिट शटल कारहरू छन्।
२. प्रश्न: कुन कुराले तपाईंलाई अरूसँग फरक बनाउँछ?
A: १) हामीसँग mechanical० भन्दा बढी मेकानिकल, इलेक्ट्रिकल र सफ्टवेयर ईन्जिनियरहरू छन्। EBILTECH जहिले पनि उत्पाद लाई ठूलो महत्व दिन्छ
नवीनता र अनुसन्धान र विकास। योसँग यसको आफ्नै अनुसन्धान र विकास टोली मात्र छैन, तर घरेलु प्रख्यात अनुसन्धानमा सहयोग गर्दछ
संस्थानहरू, ताकि लगातार उद्यमको टेक्निकल शक्ति वृद्धि गर्न सकिन्छ। हाम्रो स्वतन्त्र अनुसन्धान र WMS को विकास
प्रणाली र WCS प्रणाली। हामीसँग national० भन्दा बढी राष्ट्रिय पेटन्टहरू छन्।
२) हाम्रो उत्कृष्ट सेवा
द्रुत को लागी, कुनै परेशानी उद्धरण मात्र हामीलाई ईमेल पठाउनुहोस्
हामी २ 24 घण्टा भित्र मूल्यको साथ जवाफ दिने वचन दिन्छौं - कहिलेकाँही घण्टा भित्र पनि।
यदि तपाईंलाई सल्लाह चाहिएको छ भने, ० export86-२5-2275757२० at मा हाम्रो निर्यात कार्यालयमा कल गर्नुहोस्, हामी तपाईंको प्रश्नहरूको जवाफ तुरून्त दिनेछौं।
)) हाम्रो द्रुत उत्पादन समय
सामान्य अर्डरहरूको लागि, हामी २०--30० दिन भित्र उत्पादन गर्ने वचन दिन्छौं।
एक manufactoiy को रूपमा, हामी औपचारिक अनुबंध अनुसार वितरण समय एस्सोर गर्न सक्छौं।
Q. प्रश्न: स्थापना र डिबगिंग सेवाहरू के हो?
A: हामीसंग सम्पन्न समुहको अनुभव सहितको स्थापना टोलीहरू छन्। रेडियो शटल कारका लागि, हामी साइटका लागि ईन्जिनियरहरू पठाउनेछौं
डिबगिंग र प्रशिक्षण। र्याकिंग प्रणालीहरूको लागि, हामी हाम्रो आफ्नै टीमहरूद्वारा स्थापना गर्न सक्दछौं वा अपरेसनलाई अपरेसन निर्देशन गर्नका लागि नियुक्ति गर्न सक्दछौं। हामी
दक्षिणपूर्वी एशिया, अमेरिकी, यूरोपीयनमा धेरै प्रोजेक्टहरू गरिसकेका छन्।
Q. प्रश्न: MOQ के अर्डर गर्न सक्छ? A: सामान्यतया एक 20ft कन्टेनर हो, तर ठूलो परिमाण राम्रो मूल्यको साथ आउँदछ
Q. प्रश्न: भुक्तानी के हो?
A: T / T वा LC
शीर्षक यहाँ जान्छ।
अर्ध स्वचालित पीईटी बोतल उड्ने मेशीन बोतल बनाउने मशीन बोतल मोल्डिंग मेशीन पीईटी बोतल बनाउने मेसिन सबै आकारमा पीईटी प्लास्टिक कन्टेनर र बोतलहरू उत्पादन गर्न उपयुक्त छ।
अघिल्लो: पेशेवर गोदामहरू बहु-स्तर शटल प्रणाली योजना, स्वचालित र्याकिंग प्रणालीहरू
अर्को: लचिलो टेलर्ड गोदाम औद्योगिक उपकरण र्याक भारी शुल्क भण्डारण इस्पात भण्डारण रैकिंग
शटल Asrs , स्टील प्लेटफार्म , बहु-तह शटल , लेनवे शटल , स्ट्याकर , प्लेटफार्म बिक्री ,